Muxuu Dalxiiska Singapore sameynayaa si uu u soo baxo COVID-19 kadib?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Singapore » Muxuu Dalxiiska Singapore sameynayaa si uu u soo baxo COVID-19 kadib?
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • Dib-u-dhiska • Wararka Singapore • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Warshadaha dalxiiska ee Singapore waxay sameynayaan qeybtooda la dagaalanka saameynta COVID-19 soo saarida moodooyinka cusub ee howlgalka maadaama ay taageerto dadaalada lagula dagaallamayo coronavirus.
Xayiraadaha socdaalka adduunka oo aan horay loo arag iyo xirnaanshaha xuduudaha awgeed, Dalxiiska Singapore wuxuu arkay hoos u dhac ku yimid soo booqdayaasha iyo rasiidhada dalxiis ee sannadka 2020. Soo-booqdayaasha (VA) waxay hoos u dhaceen boqolkiiba 85.7 sannadka 2020 si ay u gaaraan 2.7 milyan oo soo booqdeyaal ah (ku dhowaad dhammaan laga soo bilaabo 2-dii bilood ee ugu horreysay 2020). Rasiidhada dalxiiska (TR) waxay hoos u dhacday boqolkiiba 78.4 illaa S $ 4.4 bilyan saddexda rubuc ee ugu horreeya sannadka 3.
In kasta oo ay ku adkaysatay sanadkii ugu adkaa ee la diiwaan galiyo, waaxda dalxiiska ee Singapore waxay qaadatay tallaabooyin ay dib uga fikirto waxyaabaha ay soo bandhigtay iyo waayo-aragnimadooda, iyadoo la taageerayo dadaallada dalka oo dhan si wax looga qabto Cudurka faafa ee COVID-19. Shirkadaha dalxiiska la xiriira ayaa ka faa'iideystay tallaabooyin kala duwan oo taageero dowladeed ah si ay u beddelaan wax soo saarkooda iyo waxay bixiyaan intay dhisayeen awoodo cusub oo ay isku dejiyaan fursadaha koritaanka mustaqbalka.
Mr. Keith Tan, Madaxa Fulinta ee Golaha Dalxiiska ee Singapore (STB) ayaa yidhi: "Qaybta dalxiiska ee Singapore waxay ahayd inay u halgamaan badbaadada sanadka 2020. Ganacsiyadeena dalxiis waxay muujiyeen adkeysi baaxad leh iyo la qabsi inta lagu gudajiray muddadan adag, dib u soo nooleynta qaababkoodii ganacsi iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda si xal loogu helo adduunyada COVID-19. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay sida ay iigu heellan yihiin inay dadka reer Singapore nabad iyo caafimaad helaan.
“STB waxay weli kalsooni ku qabtaa booska Singapore oo ah mid ka mid ah meelaha ugu ammaansan uguna soo jiidashada badan adduunka iyo goobaha ganacsiga iyo rajada fog ee waaxda dalxiiska ee Singapore. In kasta oo safarada badan ee caalamiga ah aysan u muuqan inay dib u bilaabaneyso si weyn marka la gaaro sanadka 2021, STB waxay sii wadi doontaa inay si wadajir ah ula istaagto shuraakadayada warshadaha si aan ugu diyaargarowno soo kabashada iyo inaan bilowno dhisida mustaqbal wanaagsan oo waara oo dalxiiska. ”
Xitaa sannadkan adag, ganacsiyada dalxiisku waxay door muhiim ah ka ciyaareen dagaalkii Singapore ay kula jirtay COVID-19. Huteeladu waxay u bixiyeen guryahooda ujeedooyin kaladuwan oo hoy, oo ay kujiraan Xarumaha karantiil ee Dowlada, Goobaha Gooni Goynta. iyo Ogeysiiska Guriga-Joogtada ah ee Xarumaha Loo-hibeeyay (SDFs). Tusaale ahaan, in ka badan 70 hudheelo ayaa SDF u adeegay meelo kala duwan laga soo bilaabo Maarso 2020. Laga bilaabo Diseembar 31, 2020, SDFs waxay dejiyeen in ka badan 80,000 oo qof oo ku jira Ogaysiiska Guriga-Joogtada ah, iyada oo ay taageerayaan in ka badan 2,300 shaqaalaha safka hore ee warshadaha hudheelada ah .
Dalxiisyada Isku-dhafan ayaa sidoo kale siyaabo kale ugu darsaday. In ka badan 2,000 oo shaqaale Resorts World Sentosa ah ayaa ka soo shaqeeyey Xarunta Daryeelka Bulshada ee Singapore EXPO iyo MAX Atria, iyo sidoo kale bakhaarka weyn ee bakhaarka weyn. Waxay maareyn jireen howlaha, waxay siinayeen cunno, iyo xirmooyinka daryeelka. Marina Bay Sands ayaa ugu deeqday Bangiga Cuntada ilaa 15,000 kg oo cunto ah waxayna soo xirtay 15,000 xirmooyinka daryeelka ah ee loogu talagalay shaqaalaha haajiraya iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ay saameeyeen aafada.